I-Russia iqala kabusha izindiza ze-Iraq, Kenya, Slovakia neSpain, izindiza zase-Afghanistan kumele zilinde
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-Russia iqala kabusha izindiza ze-Iraq, Kenya, Slovakia neSpain, izindiza zase-Afghanistan kumele zilinde
Izindaba ze-Afghanistan Breaking • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba Ze-Iraq • IKenya Breaking News • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • I-Russia Breaking News • Ukuphepha • Izindaba zaseSlovakia • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
I-Russia iqala kabusha izindiza eziya e-Iraq, Kenya, Slovakia naseSpain, izindiza zase-Afghanistan kumele zilinde
Ngokusho kweminye imithombo kahulumeni waseRussia, isinqumo sokulungiswa kwezindiza ezivamile zomphakathi kanye neKabul nokunikezwa kwezikhala kubo ngohlelo ngabaphethe izindiza baseRussia asikenziwa. Kusengaphambi kwesikhathi ukukhuluma ngokuqala kwezindiza zomphakathi lapho njalo.
I-Russia iqale kabusha inkonzo yomoya namanye amazwe amane.
Izindiza ezisuka eMoscow ziya eKenya, Slovakia, Iraq naseSpain ziqala phansi.
Azikho izindiza ezisuka eRussia ziya e-Afghanistan okwamanje.
Ecaphuna isikhungo sikazwelonke sokulwa nezinkinga ze-COVID, uhulumeni waseRussia umemezele namuhla ukuthi iRussia Federation izovula kabusha insizakalo yezindiza yabagibeli ejwayelekile e-Iraq, Kenya, Slovakia naseSpain ezoqala ngoSepthemba 21, 2021.
"IRussia iqala kabusha inkonzo yezindiza neSpain, Iraq, Kenya, neSlovakia kusukela ngoSepthemba 21," kubhala izikhulu ngohulumeni waseRussia Federation yocingo isiteshi.
Izindiza eziya eGibhithe naseTurkey zisuka emadolobheni amane aseRussia - iPskov, iMagadan, iMurmansk neChita, zizophinda ziqale kabusha kusuka ngoSepthemba 21.
Ngasikhathi sinye, iziphathimandla zaseRussia ziveze ukungathandi kwazo ukubuyisa ukuhamba kwabagibeli okuvamile ne-Afghanistan.
Ngokusho kweminye imithombo kahulumeni waseRussia, isinqumo ngokulungiswa kwezindiza ezivamile zomphakathi nge Kabul nokuhlinzekwa kwezikhala kubo ngesheduli yithwali lomoya laseRussia akukenziwa. Kusengaphambi kwesikhathi ukukhuluma ngokuqala kwezindiza zomphakathi lapho njalo.
Ukuze uqalise ukuxhumana njalo noKabul, kuzodingeka isinqumo esifanele sendlunkulu yokusebenza ukuvimbela ukungeniswa nokusabalala kokutheleleka nge-COVID-19.
Yonke ingqalasizinda edingekayo yesikhumulo sezindiza kumele yenziwe eKabul kuqala ukuze kuqinisekiswe umsebenzi wabalawuli bezindiza ezindizeni ngokuya ngamazinga okuphepha endiza yomhlaba wonke.
Kwabikwa phambilini ukuthi iziphathimandla zeTaliban zamemezela isifiso sazo sokuqhubeka nokuhamba ngezindiza neRussia neTurkey.